Kutanga-up ongororo yegesi jenareta seti kutadza
Zvekushanda kwesimba remagetsi, zvishandiso zvemagetsi uye majenareta akakosha mafambisirwo, ayo anogona kukanganisa kugona kwemagetsi emuchina wemagetsi zvakanyanya. Kana simba rekugonesa risina kukwana, saka kugadzirwa kwemaindasitiri kuno ...
Ndezvipi zvinoshandiswa nemagetsi emagetsi
Ndezvipi zvinoshandiswa negasi jenareta? Iyo jenareta yegasi imhando yemagetsi ekugadzira michina. Yayo inoshanda musimboti ndeyekuti injini inopisa gasi, kupisa simba inoshandurwa kuita mehendi simba, uye kutenderera kwejenareta kunotyaira iyo yekucheka ma ...
Mashandisiro ekuti jenareta iiswe nemazvo pasi pehasha
Iko kushandiswa kwejenareta kunoisa pasi peyakaomarara mamiriro ezvakatipoteredza kunonyanya kukonzerwa nemhedzisiro yezvakatipoteredza zvinhu. Dzimwe matanho uye nzira dzinofanirwa kutorwa munzvimbo dzakakwirira-dzenzvimbo dzenzvimbo uye pasi pemamiriro ekunze anotonhora. Izvi zvinotevera ndizvo ...